Sɛnea Wɔsom Onyankopɔn ne Sɛnea Wubehu Nokware Asomfo | Bible Kyerɛkyerɛ
YEHOWA NYANKOPƆN dwen yɛn ho paa, na ɔpɛ sɛ yenya n’akwankyerɛ a ofi ɔdɔ mu de ma no so mfaso. Sɛ yɛsom no wɔ ɔkwampa so a, yebenya anigye, na asetram haw ahorow pii remma yɛn so. Yebenya ne nhyira ne ne mmoa nso. (Yesaia 48:17) Nanso, ɔsom ɔhaha pii na ɛwɔ hɔ a wɔka sɛ wɔkyerɛkyerɛ Onyankopɔn ho nokwasɛm. Nea ɛte ne sɛ, nsonsonoe kɛse wɔ nea wɔn mu biara kyerɛkyerɛ fa onii kō a Onyankopɔn yɛ ne nea ɔhwehwɛ fi yɛn hɔ no mu koraa.
5 Yɛbɛyɛ dɛn ahu ‘ɔkwan a ɛkɔ nkwa mu no’? Yesu kae sɛ yɛnam nnipa a wɔwɔ nokware som mu abrabɔ so na yebehu nokware som. Ɔkae sɛ: “Mode wɔn aba na ebehu wɔn . . . Dua pa biara sow aba pa.” (Mateo 7:16, 17) Sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu a, wɔde nokware som mufo gyidi ne wɔn abrabɔ na ebehu wɔn. Ɛwom sɛ nokware som mufo nyɛ pɛ na wodi mfomso de, nanso sɛ́ kuw no, wɔbɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ Onyankopɔn apɛde. Ma yensusuw nneɛma asia bi a ɛbɛma yɛahu wɔn a wɔyɛ nokware som mufo ho nhwɛ.
6 Onyankopɔn asomfo de wɔn nkyerɛkyerɛ gyina Bible so. Bible ankasa ka sɛ: “Kyerɛwnsɛm nyinaa fi Nyankopɔn honhom mu, na eye ma ɔkyerɛkyerɛ, ntɛnyi, nneɛma ateɛteɛ, trenee mu nteɛso, na Onyankopɔn nipa afata koraa a wɔasiesie no yiye ama adwuma pa biara.” (2 Timoteo 3:16, 17) Ɔsomafo Paulo kyerɛw kɔmaa ne mfɛfo Kristofo sɛ: “Bere a mugyee Onyankopɔn asɛm a mote fii yɛn hɔ no, moannye no sɛ nnipa asɛm, na mmom sɛ Onyankopɔn asɛm, sɛnea ɛte ankasa.” (1 Tesalonikafo 2:13) Enti, nokware som mu gyidi ne abrabɔ nnyina nnipa nsusuwii anaa atetesɛm bi so. Mmom no, egyina Bible, Onyankopɔn Asɛm so.
8 Nokware som mufo som Yehowa nkutoo na wɔbɔ ne din kyerɛ afoforo. Yesu kae sɛ: “Yehowa wo Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wokotow no, na ɔno nkutoo na ɛsɛ sɛ wosom no.” (Mateo 4:10) Eyi nti, Yehowa nkutoo na Onyankopɔn asomfo som no. Ɔsom yi fã bi ne nokware Nyankopɔn no din ne sɛnea ɔte a wɔma afoforo hu. Dwom 83:18 ka sɛ: “Wo a wo din de [Yehowa, NW] no, wo nko ara ne ɔsorosoroni, asase nyinaa so.” Yesu yɛɛ nkurɔfo a yɛbɛboa wɔn ma wɔahu Onyankopɔn ho nhwɛso too hɔ. Ɔkae wɔ mpaebɔ mu sɛ: “Mada wo din adi akyerɛ nnipa a wuyii wɔn fii wiase maa me no.” (Yohane 17:6) Saa ara na ɛnnɛ nso, nokware asomfo kyerɛkyerɛ nkurɔfo Onyankopɔn din, n’atirimpɔw, ne ne su ahorow.
9 Onyankopɔn asomfo da nokware dɔ a pɛsɛmenkominya nnim adi kyerɛ wɔn ho wɔn ho. Yesu kae sɛ: “Sɛ mododɔ mo ho a, ɛno na ɛbɛma nnipa nyinaa ahu sɛ moyɛ m’asuafo.” (Yohane 13:35) Ná tete Kristofo no da ɔdɔ a ɛte saa adi kyerɛ wɔn ho wɔn ho. Abusua a obi fi mu, dibea a ɔwɔ, ne ɔman a ofi mu ntumi nsɛe nokware dɔ a Onyankopɔn aka sɛ n’asomfo nna no adi no, na saa ɔdɔ no ka nnipa bom ma wonya onuayɛ kuw a emu yɛ den. (Kolosefo 3:14) Atoro som mufo nni onuayɛ kuw a ɔdɔ wom saa. Yɛyɛ dɛn hu saa? Wokunkum wɔn ho wɔn ho esiane sɛ ɛsono abusua ne ɔman a wofi mu nti. Nokware Kristofo nkɔ ɔko nkokunkum wɔn nuanom Kristofo anaa nnipa foforo biara. Bible ka sɛ: “Nokwasɛm a ɛma Nyankopɔn mma ne Ɔbonsam mma da adi pefee ni: Obiara a ɔnyɛ adetrenee no mfi Nyankopɔn mu, na saa ara na nea ɔnnɔ ne nua no nso mfi ne mu. . . . Yɛnnodɔ yɛn ho; ɛnyɛ sɛ Kain a ofi ɔbɔne no mu na okum ne nua no.”—1 Yohane 3:10-12; 4:20, 21.
11 Nokware Kristofo gye Yesu Kristo tom sɛ nea Onyankopɔn nam no so begye nnipa nkwa. Bible ka sɛ: “Nkwagye nni obi foforo biara mu, na edin foforo biara nni ɔsoro ase a wɔde ama wɔ nnipa mu sɛ wɔmfa so nnye yɛn nkwa.” (Asomafo Nnwuma 4:12) Sɛnea yehui wɔ nhoma yi Ti 5 no, Yesu de ne nkwa ayɛ agyede ama nnipa a wɔn aso yɛ mmerɛw. (Mateo 20:28) Afei nso, Yesu na Onyankopɔn apaw no sɛ ɔsoro Ahenni a ebedi asase nyinaa so no so Hene. Na sɛ yɛpɛ daa nkwa a, Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yetie Yesu na yɛde ne nkyerɛkyerɛ yɛ adwuma. Ɛno nti na Bible ka sɛ: “Nea ogye Ɔba no di no wɔ daa nkwa; nea ontie Ɔba no renhu nkwa.”—Yohane 3:36.
12 Nokware asomfo mfi wiase. Bere a na wɔredi Yesu asɛm wɔ Roma sodifo Pilato anim no, Yesu kae sɛ: “M’ahenni mfi wiase.” (Yohane 18:36) Ɛmfa ho ɔman kõ a Yesu nokware akyidifo te mu no, wɔyɛ ɔsoro Ahenni no manfo ma enti wɔtwe wɔn ho fi wiase no amanyɔsɛm ho koraa. Wɔmfa wɔn ho nhyehyɛ wiase no akodi mu. Nanso, sɛ nkurɔfo paw sɛ wɔbɛdɔm amanyɔkuw bi, wobegyina ama wɔatow aba ama wɔn, anaa wɔka sɛ wɔbɛtow aba a, Yehowa asomfo nka ho asɛm. Ɛwom sɛ Onyankopɔn asomfo mfa wɔn ho nhyehyɛ amanyɔsɛm mu de, nanso wodi mmara so. Dɛn ntia? Efisɛ Onyankopɔn Asɛm hyɛ wɔn sɛ ‘wɔmmrɛ wɔn ho ase nhyɛ atumfoɔ a wɔkorɔn no ase.’ (Romafo 13:1) Sɛ ɛba sɛ nea atumfoɔ no hwehwɛ ne nea Onyankopɔn hwehwɛ nhyia a, nokware asomfo di nhwɛso a asomafo no yɛe no akyi sɛ: “Ɛsɛ sɛ yetie Nyankopɔn mmom sen nnipa.”—Asomafo Nnwuma 5:29; Marko 12:17.
13 Yesu akyidifo anokwafo kyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn Ahenni ne nnipa anidaso koro pɛ. Yesu ka too hɔ sɛ: “Wɔbɛka ahenni ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa de adi amanaman nyinaa adanse; ɛno ansa na awiei no bɛba.” (Mateo 24:14) Sɛ́ anka Yesu Kristo akyidifo anokwafo bɛhyɛ nkurɔfo nkuran sɛ wɔnhwɛ kwan sɛ nnipa sodifo bedi wɔn haw ahorow ho dwuma ama wɔn no, wɔkyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn Ahenni a ɛwɔ soro no ne nnipa nyinaa anidaso koro pɛ. (Dwom 146:3) Ɛyɛ saa nniso a edi mũ no na Yesu kae sɛ yɛmmɔ mpae ma ɛmmra bere a ɔkaa eyi no: “W’ahenni mmra. W’apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so sɛnea ɛte wɔ soro.” (Mateo 6:10) Onyankopɔn Asɛm ka too hɔ sɛ saa ɔsoro Ahenni no ‘bebubu ahenni ahorow a ɛwɔ hɔ nnɛ nyinaa ma asã, na ɛno de, ebegyina daa.’—Daniel 2:44.
17 Bible da no adi sɛ atoro som nyinaa na wɔka bom frɛ no “Babilon Kɛse” no. * (Adiyisɛm 17:5) Saa din no ma yɛkae tete kurow Babilon, faako a atoro som fii ase wɔ Noa bere so Nsuyiri no akyi no. Atoro som nkyerɛkyerɛ ne nneyɛe a abu so nnɛ no fii ase teteete wɔ Babilon. Sɛ nhwɛso no, na Babilonfo som baasakoro anyame. Ɛnnɛ, Baasakoro abɛyɛ ɔsom ahorow pii nkyerɛkyerɛ titiriw. Nanso Bible ka no pefee sɛ nokware Nyankopɔn koro pɛ na ɔwɔ hɔ, ɔne Yehowa, na Yesu Kristo yɛ ne Ba. (Yohane 17:3) Ná Babilonfo no san gye di sɛ onipa wɔ ɔkra bi a enwu da hyɛ ne mu na wotumi yɛ saa ɔkra no ayayade bere a nipadua no awu no. Ɛnnɛ, ɔsom dodow no ara kyerɛkyerɛ sɛ ɔkra anaa honhom a enwu da hyɛ onipa mu a wobetumi ayɛ no ayayade wɔ hellgya mu.
^ nky. 17 Sɛ wopɛ nea enti a wɔde Babilon Kɛse gyina hɔ ma wiase nyinaa atoro som ahemman no ho nsɛm pii a, hwɛ Nkekaho a ɛwɔ kratafa 219-20 no.
Share Share Ɔsom a Ɛsɔ Onyankopɔn Ani
bh ti 15 kr. 144-153